नाङ्गिदै छ चुरे र भावर क्षेत्रका डाँडाहरु – Shirish News
महोत्तरीको बर्दिबासका वरिपरीका जंगल उजाड बनेको छ । चुरे र भावर क्षेत्रका डाँडाहरु नाङ्गिएको हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विस्तारको क्रममा ठूलो क्षेत्रफलमा महोत्तरीका वन क्षेत्र विनासिदैंछ । सामुदायिक वन, साँझेदारी जंगल र सागरनाथ वन विकास परियोजनाको अधिनमा रहेको हजारौं रुखहरु काटिदाँ संरक्षित चुरे र भावर क्षेत्रका डाँडाहरु सुनसान वन्न पुगेको हो ।
हेटौंडा—ढल्केवर—दुवही चार सय के.भी. विद्युत प्रसारण लाईन आयोजना र बर्दिबास—सिमरा विद्युतिय रेलमार्ग निर्माणको क्रममा महोत्तरीको २ सय ३९.३२७ हेक्टर वन नासिएको हो । रेल्वे मार्ग निर्माणका लागी बीच भागबाट —५०—५० मिटर वरिपरीको १६ कि.मी. दुरीका चार हजार एक सय ८७ वटा रुख कटान भएको सागरनाथ वन विकास परियोजना हात्तिलेटका फोरेस्ट्रर(सुरपरभाइजर) इन्द्रप्रसाद गौतमले जनाए । साल, सिसौं र मसाला प्रजातिका रुखहरु बढी कटान भएको उनले भने ।
हेटौंडा—ढल्केवर—दुवही चार सय के.भी. विद्युत प्रसारण लाईन आयोजनाले चुरेका डाँडा र पाँखाहरुमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले हुर्काका बहुमुल्य सखुवा(साल), खयर प्रजातीका अधिकांस रुखहरु काटान भएको हो । वनमा हुर्किदैं गरेका लोभलाग्दो सालका लाथ्राहरु काटिदाँ वनका डाँडापाँखा सुनसान बनेको छ । चराचुरुङ्गगीको गुड उजडिएको छ । वन हुर्कादैं गरेका उपभोक्ताहरु निराश बनेका छन् ।
प्रसारण लाइन विस्तारको क्रममा बर्दिबासका रम्तेल डाँडा, माइस्थान, पानी खोल्सी रातमाटा र गाल्टार गरी चार सामुदायिक वनको तीन हजार एक सय ७० वटा रुख कटान भइरहेको माइस्थान सेक्टर वन कार्यालय बर्दिबासका प्रमुख भिमविक्रम खड्काले जनाए ।
उनका अनुसार बाँके मरहा, टुटेश्वरनाथ, गढण्ता गरी तीन साँझेदारी वनका १५ हजार ९ सय ८२ वटा रुख काटन गर्न लागिएको छ ।
कूल २३ हजार चार सय ५५ हेक्टरमा फैलिएको वन क्षेत्रबाटै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विस्तार गरेपछी महोत्तरीको २ सय ३९.३२७ हेक्टर वन क्षेत्र मासिएको जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।
रेल मार्ग विस्तारको लागि भावर क्षेत्रमा सबै रुख कटान भइसकेको छ । प्रसारण लाईन विस्तारका लागि विद्युत आयोजनाले सामुदायिक वन क्षेत्रमा धमाधम कटान गरिरहेको पाटु इलाका वन कार्यालय बर्दिबासका साहयक वन अधिकृत शिवचन्द्र प्रसाद यादवले जनाए ।
साँझेदारी वनमा ठूल ठूला १५ हजार नौं सय ८२ वटा रुख काटनु पर्ने भएकोले साँझादारी वनले कटानको लागि बैशाख ११ गते ३५ दिने सूचनाका निकालेको छ ।
दुई दशकदेखी छोराछोरी जस्तै माया गरेर समुदायले हुर्काको वनका कलिला सालका लाथ्रा काटिएपछी वनउपभोक्ता समितिको मन कुँडिएको छ ।
‘विकासको नाममा संरक्षित चुरे क्षेत्रको रुख काटान भयो । सरकारले हराभरा डाँडालाई नाङ्गो बनायो,’पानी खोल्सी रातमाटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मातृका प्रासाद पोखेरेलले भने,‘विजुलीको विकास हुनु ठीक हो तर, हामीले जोगाएको चुरे क्षेत्रको रुख कटान गर्नु गल्त हो ।’ चुरे क्षेत्रको वन नासिदा जैविक विविधतामा गम्भिर असर परेको उनले सुनाए ।
विद्युत आयोजना विस्तारले पानी खोल्सी रातमाटा वन उपभोक्ता समुहको दुई हजार चार सय ३४ वटा कलिला रुखहरु काटिएको छ । रुख कटानले बढी यसै समुहको वनमा क्षति पुगेको छ ।
साल, खयर, कुसुम, बाझी, शिरिष, सिन्दुरे, सिमल फलेदो, भलायो, जमुना, सिसौं जस्ता रुखहरु चुरे क्षेत्रका डाँडाँहरुबाट कटान भएपछी वन क्षेत्र नांङ्गिएको बर्दिबासका स्थानीय रामबहादुर सुवेदीले बताए ।
‘सरकारले नै चुरे संरक्षणको योजना ल्याउँछ ।फेरी सरकारले नै चुरेमा स्थानीयले हुर्काएरको रुख विकासको नाममा कटान गरिदिन्छ,’ उनले भने,‘चुरे विनासले तराईको अन्नभण्डारमा धक्का पुगेको छ ।’
खानेपानीको स्रोतलाई रिचार्ज गर्ने चुरे क्षेत्र क्रमिक रुपमा नासिदैं गएको छ । दिनहुँको वन फडानी र ठूल—ठूला विकास योजनाले चुरे क्षेत्रको जंगल उजाड बनेको छ ।
बर्दिबासका २५ हजार स्थानीयलाई वितरण गरिने पानीको स्रोत वरिपरीको रुख विद्युत आयोजना विस्तारले सखाप परेको छ ।
वन फडाँनी र वनमा हुने आगलागीले वनजन्तुको बास स्थान संकटमा परेको छ । गौशाला रामनगरका स्थानीय सुनिलकुमार महतोका अनुसार, जंगली जीवजन्तहरु बास स्थानको खोजीमा गाउँमा भौतारिएर पुग्ने गरेको छ ।
वन क्षेत्रमा पाइने चितल, हरिण, बदेल, निलगाई, वनकुखुरा जस्ता जीव जन्तुको बास स्थान नष्ट भएपछी उनीहरु तितरवितर भएका छन् ।
वन विनासले वन्यजन्तुको चोरी सिकारी पनि बढेको छ । वन्यजन्तुको सिकार गर्ने ६ जना सिकारीलाई बर्दिबास, माइस्थान, पाटुका वन क्षेत्रबाट यस अघिका महिनाहरुमा पाँच थान भरुवा बन्दु सहित पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासका डिएसपी प्रवीण पोखरेलले जनाए ।
विकासको नाममा गरिएको वन विनासले ठूलो विनासलाई सरकार आफैले निम्तोको पत्र पठाएको चुरे संरक्षण अभियानी नागदेव यादवले बताए ।
राज्यले कम क्षति गरेर विकास आयोजनाहरु संचालन गर्नु पर्नेमा उनले सरकारलाई सुझाँए । ‘चुरे नाङ्गगियो । बाढी पहिरो पक्कै बढ्छ,’ दुई दशक देखी चुरे संरक्षण अभियानमा सक्रिय रहँदै आएका यादवले भने,‘अबको बर्षामा चुरेमा ठूलो क्षति हुन्छ । खोल्साखोल्सीले ठूलो रुप लिन्छ । यसको पीडा स्थानीयले ब्यहोर्न बाध्य हुन्छन् ।’ वन फडाँनीले जैविक विविधता असन्तुलित बन्दै गरेको उनले बताए ।
अनियन्त्रित वन कटानीले पाँच‘ज’लाई नै असर पु¥याएको चुरे संरक्षणकर्मी यादवले थपे । विकास निर्माणको काम गर्दा सरकारले जल, जंगल, जमिन, जनावर र जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा दिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
टन्क र अशोकको प्रस्तुतिमा झुम्यो झापा भिडियो सहित